Who were Bengali, so called Rohingya?: OPEN LETTER TO THE SECRETARY GENERAL OF UNO
အိမ်ရှင်တွေခမျာ ကိုယ့်အိမ်ကိုယ် မနည်းပြန်လုနေရတဲ့ ဘ၀ပါ။ ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဆီကို ဒေသခံရခိုင်လူမျိုးတွေ အိပ်ဖွင့်ပေးစာဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Anti Rohingya (Bengali Muslim) - Anti Terrorist at 7:30 PM
Labels: သတင်း, ပေးစာ, ကြေငြာချက်
Owe Nwa mogh (rakhine) dwea, min do lu myo dwea sa dong ma rea tet lah kwa.
မဖတ်ဖူးသောစာအုပ်အမည်နှင့်၎င်းထဲမှစာသားအချို့ ကိုဖတ်ပြီးဗဟိုသုတရရှိဖို့မေတ္တာဖြင့်တင်ပြပါသည်။ (1)၁၉၇၉ခုနှစ်ထုတ် နှစ်(၃၀)မြန်မာ့အသံ စာအုပ်၏စာမျက်နှာ (၇၀)မှအသံလွင့်ချိန်များကိုရုတ်တရက်အားဖြင့်တိုးချဲ့ခြင်းမပြုနိုင် သေးသော်လည်းတိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးကို
ရှေးရှုးရ်ျ တိုင်းရင်းသားဘာသာအစီစဉ်များတွင်လက်ရှိအသံလွင့်နေသော တိုင်းရင်းသားဘာသာများအပြင်နောက်ထပ်ဘာသာစကားလေးမျိုး ကိုတိုးချဲံ့ အသံလွင့်ရန်အစိုးရအဖွဲ.၏
ဆုံးဖြတ်ချက်အရ ၁၉၆၁ ခုနှစ်မေလ ၁၅ ရက်နေ့တွင် မွန်ဘာသာ၊ပအို့ဝ်ဘာသာ၊လာဟူးဘာသာ၊နှင့်
ရိုဟင်ဂျာဘာသာ အစီစဉ်များကိုတဘာသာလျင် ၁၀ မီနစ်စီ စတင်အသံလွင့်ခဲ့ပါသည် ဟုပါရှိပါသည်။ (2)၁၉၅၈-၁၉၆၂ မြန်မာ့ နိုင်ငံရေးတတိယတွဲ ၏ စာမျက်နှာ ၁၂၈ တွင် အကျယ်တ၀င့်ဖတ်ပါ။ စာမျက်နှာ ၁၃၀ မှ အနည်းငယ်ပေါ်ပြလိုပါသည်။ အကြံပေးအဖွဲ့ အစီရင်ခံစာမှာပင် မေယုနယ်ခြားခိုင်၌နေထိုင်ကြသော ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတို့ကလည်းပြည်နယ်မလိုလားဟု ၄င်းတို့ခေါင်းဆောင်များကအကြံပေးအဖွဲ့အားတင်ပြခဲ့ကြောင်း၊ ပြည်နယ်ပေးလျှင် ၄င်းတို့အား ပြည်မနှင့်တွဲ ရ်ျ ချန်လှန်ထားရန်တောင်းပန်ကြောင်း၊ စစ်တွေခရိုင်ကမူ ၉၀ နုန်းသောရခိုင်အမျိုးသားများက ပြည်နယ်လိုလားကြောင်း၊
ကျေက်ဖြူခရိုင် တွင်ပြည်နယ်လိုလားသူများနှင့်မလိုလားသူများ အညီအမျှရှိသည်ဟုယူဆပါကြောင်းပေါ်ပြထားပါသည်။ စာမျက်နှာ ၁၆၈ တွင်.........ဦးလှထွန်းဖြူနှင့်ရန်ကုန်ရှိထင်ရှားသော ရခိုင်ခေါင်းဆောင်အချို့သည်အာရကံနီစတန် ရခိုင် ပြည်နယ်တောင်းဆိုရေးအတွက်ဆန္ဒစိုင်းပြင်းနေပြီး အစည်းအဝေးများကျင်းပရန်လှုပ်ရှားခဲ့ပါသည်ဟုပါရှိပါသည်။ (3) မြန်မာနိုင်ငံပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှထုတ်ဝေခဲ့သော ( မေယုရှေးရေး)စာအုပ်ကိုလည်းဖတ်စေလိုပါသည်။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ရိုဟင်ဂျာကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ အသင်းဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် ( UNIVERSITY OF RANGOON) REGISTRATION No. 113/59 , DATE 3rd DECEMBER 1959 ဖြစ်ပါတယ်။ (4)မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း အတွဲ (၉)စာမျက်နှာ (၉၀) မှအနည်းငယ် ရေးထားသည်။ မေယုနယ်ခြားခရိုင်တွင် လူဦးရေး ၄သိန်း ၅ သိန်းရှိပါသည်။ ၇၅ ရာခိုင် နုန်းမှာ ရိုဟင်ဂျာများဖြစ်ကြပြီး ရခိုင်၊ ဒိုင်းနက်၊မြို၊ ခမွီးစသောတိုင်းရင်းသားများနေထိုင်ကြသည်။ ရိုဟင်ဂျာ တို့သည် အစ္စလာမ်ဝါဒီများဖြစ်ပြီး၊ ရခိုင်တို့သည် ဗုဓ္ဒ၀ါဒီများဖြစ်သည်။ ကျန်လူမျိုးများသည် နတ်များကို. ကိုးကွယ်ဆည်း
ကပ်ကြလေသည်။ ဟုပါရှိပါသည်။ ထို့ပြင်များစွာဖတ်ရှုးနိုင်ပါသည်။ ပြည်ထောင်စုဆိုရှယ်လစ်သမ္မတမြန်မာနိုင်
ငံတော်ပညာရေး ၀န်ကြီးဌာန မှ ၁၉၇၈ ခုနှစ် ထုတ် မြန်မာနိုင်ငံပထ၀ီဝင် အထက်တန်းပြစာအုပ်
မြန်မာနိုင်ငံမြေပုံတွင်ကြည့်ပါ။ ဖတ်ပါ။ ၁၉၆၁ ခုနှစ်သြဂုတ်လ(၃)ရက်နေ့ထုတ် တပ်မတော်ခေတ်ရေးစာစောင်ကို (စိတ်ဝင်စားရင်ရှာဖတ်ပါ) နဲ့နဲ့လေးတော့ရေးပေးထားခဲ့မယ်။ ခေါင်းစဉ်က (ပျောက်သောသူပြန် ရ်ျ တွေ့သည့်ပမာ)ဖြစ်
ပါတယ်။ ယခုမေယုနယ်ဟုသတ်မှတ်လိုက်သော ဘူးသီးတောင် ၊မောင်တောနယ်များတွင်(၉၇) ရာခိုင်နုန်းသည်
ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးများနေထိုင်ကြသည်။ သို့သော် ရိုဟင်ဂျာဟူသောအမည်ကို ပြည်မ ကလူထုကမသိ၊ ရိုဟင်ဂျာတို့၏ယဉ်ကျေးမှုကို ပြည်မ ကလူထုက မမြင်၊ပြည်ထောင်စုသားစစ်ဖြစ်ပါလျှက်နှင့်ရိုဟင်ဂျာတို့၏မျိုးရိုး
စဉ်ဆက်နှင့် ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးတမ်းမှတ်တမ်းတို့သည် ပြည်ထောင်စုတွင်မပေါ်ထင်ပျောက်ပြီးနေသကဲ့သို့ပင်ရှိခဲ့သည်။ တနည်းဆိုသော်ရိုဟင်ဂျာတို့သည်ပျောက်နေသောသူတစ် ယောက်ပမာရှိခဲ့ပေ၏။တကယ်တော့ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့အမည်နဲ
့ ရိုဟင်ဂျာ အမျိုးသားထုကြိးဟာပြည်ထောင်စုသားအဖြစ်ရှိခဲ့ တာဟာ ရခိုင်ဘုရင်ခေတ်ကတည်းကဖြစ်ပေသည် ဟုရေးသားထားသည်ဖတ်ရပါသည်။ ယခုရေးသမျှသည်လည်း မူရင်းတိုင်းရေးသားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လွှဲမှားစွာ သို့မဟုတ် မိမိအဘော်ဖြင့်ရေးသားသည်ဟုထင်ယူဆသူရှိပါက စာအုပ်၏မိတ္တူမှန်ကိုလိပ်စာပို့လျှင်လိပ်စာအတိုင်းပေးပို့ပါမည်။